भ्वाइस अफ नेपाल र कमेडी च्याम्पियनको भोटिङ ‘प्रभु पे’ बाट (भोटिङ तरिकासहित) ~ Banking Khabar
भ्वाइस अफ नेपाल र कमेडी च्याम्पियनको भोटिङ ‘प्रभु पे’ बाट (भोटिङ तरिकासहित)
बैंकिङ खबर / अहिले चर्चित दुई वटा शो ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ र ‘कमेडी च्याम्पियन सिजन – २’ टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको छ । हिमालय टेलिभिजन एच डिबाट प्रसारण हुने चर्चित रियालिटी सो ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ र कान्तिपुर टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने ‘कमेडी च्याम्पियन सिजन – २’ को भोटिङ पनि खुल्ला भएको छ ।
यी दुबै रियालिटी सो का लागि तपाईले प्रभु पे बाट भोटिङ गर्न सक्नुहुनेछ । ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ सिजन ३ मा उत्कृष्ट १२ प्रतिस्पर्धी छानिएका छन् । नकआउट राउन्डबाट चार जना कोचले उत्कृष्ट तीन–तीन जना प्रतिस्पर्धी छानेर लाइभ राउन्डका लागि १२ प्रतियोगी चयन गरेका हुन् ।
फाइनल भिडन्तका लागि छानिएका १२ मध्येबाट एक विजेता छान्ने अधिकार दर्शकमा दिइएको छ । दर्शकका लागि भोटिङ राउण्ड खुल्ला गर्दै आयोजकले यो अधिकार दिएको हो । त्यसका लागि तपाईले प्रभु पे डाउनलोड गरेर भोटिङ गर्न सक्नुहुनेछ । ब्लाइण्ड अडिसनदेखि हालसम्म कसलाई अगाडी बढाउने भन्ने अधिकार कोचलाई थियो । तर, अब भने नितान्त दर्शकको भोटका आधारमा प्रतिस्पर्धी अगाडी बढ्ने आयोजकले जनाएको छ । प्रतिस्पर्धाको फाइनल भिडन्तमा टीम प्रमोदबाट किरण गजमेर, निहारिका ज्ञवाली, रवि गहत राज र टीम दीपबाट आर्यन तामाङ, गोभिन पुन, जेनिस राई छानिएका छन् ।
यस्तै टीम राजुबाट बिजय ठाडामगर, सोनाम शेर्पा, तारा श्रीष र टीम तृष्णाबाट अफ्रिता खड्गी, ज्वाला राई, कर्णराज गिरी छानिएका छन् ।
यस्तै ‘कमेडी च्याम्पियन सिजन – २’ मा पनि टप सेभेनको लागि अहिले भोटिङ खुल्ला भइरहेको छ । टप सेभेनका लागि ८ जना प्रतिस्पर्धामा छन् । जसमा भारत आसामका भवन भट्टराई, ताप्लेजुङका भरतमणी पौडेल, सिक्किमका विक्की अग्रवाल, झापाकी श्रीया सुवेदी, सोलुखुम्बुका कैलाश कार्की, सुदुरपश्चिम कञ्चनपुरका हिक्मत महरा, गोरखाका सन्तोष थापा र नवलपरासीका सुसान्त बस्याल प्रतिस्पर्धामा छन् । उनीहरुले प्रसारित कार्यक्रमबाटै र विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि भोटको अपिल गरिरहेका छन् ।
कसरी गर्ने प्रभु पेबाट भोट ?
यदि तपाई दुबै रियालिटी शोका प्रतिस्पर्धिलाई भोटिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो मोवाइलमा नेट कनेक्ट गरेर मोबाइलको इनस्टलमा जानुहोस् । त्यहाँबाट प्रभु पे डाउनलोड गर्नुहोस् । भोट गर्नका लागि तपाईलाई मोबाइल नम्बर चाहिन्छ । रजिस्टर गर्नुहोस् । त्यसका लागि आफ्नो रजिस्टर हान्नुहोस् । मोवाइल नम्बरमा एउटा कोट आउने छ । त्यो हान्नुहोस् । त्यसपछि आफ्नो कुनै पासवर्ट छान्नुहोस् । भेरिफाइ हुन्छ । त्यसपछि प्रभु पे खुल्नेछ । प्रभु पे एपमा गइसकेपछि फस्ट सेक्सनमै भोटिङ भन्ने छ । त्यहाँ गएर आफुलाई मन पर्ने कन्टेक्सलाई भोट गर्न सक्नुहुनेछ ।
के हो प्रभु पे ?
प्रभु ग्रुपले ल्याएको ‘प्रभु पे’ अत्याधुनिक डिजिटल वालेट हो । मोबाइल वालेटका लागि प्रभु पे डाउन डाउनलोड गर्नुपर्छ । एप डाउनलोड गरेपछि एपबाट पैसासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यहरु जस्तै कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खाताबाट पैसा ट्रान्सफर गर्न, बिजुली, पानी लगायत अरु बिल भुक्तानी, किनमेलमा पैसा तिर्न, प्रभु टिभी रिचार्ज गर्न, एनसीएचएल डिपोजिट गर्न सकिनेछ । एपबाट युनियन पे र क्युआर कोड स्क्यान गरेरै पैसा तिर्न सकिनेछ । प्रभु ग्रुपले ‘वालेट अब मोबाइलमा’ भन्ने नाराका साथ नौलो र फरक सुविधा ल्याएको हो ।